HIIL IYO HOO
Hiil iyo Hoo waa laba arimood oo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed meel sare kaga jira, qofkii ku sifoobaana uu qadarin iyo qiimo weyn bulshadiisa ka helayo.
Dabeecadaha iyo nolosha qalafsan ee reer guuraanimada ay colaadda iyo baahida joogtada ahi salka u yihiin ayaa sababay muhimadda is taageeridda iyo is taakulaynta inta dhiig iyo dhalasho wadaagta.
Qabiilka ayaa ahaa welina ah caymiska keliya ee qofka Soomaaliyeed ku jiro ee uu u ciirsado maalinta ay arrini ka maroorto. Haddii uu dhib geysto qabiilkiisa ayay masuuliyadda kama dambeysta ahi ku soo noqonaysay oo furdaamin jiray welina furdaamiya. Sidoo kale haddii uu dhibbane yahay iyagaa qareen u ah oo inay xaqiisa soo dhiciyaan masuul ka ah.
Qofku waa inuu mar kasta diyaar la yahay wixii hiil iyo hoo looga soo baahdaba, haddii hagar iyo lexojeclo laga dareemana wuxuu noqonayaa wax matare bakhayl ah oo aan sharaf ku lahayn dadkiisa. Gar iyo gardaba waa inuu qabiilkiisa ku taageeraa, waana halka ay Soomaalidu ka tiraahdo fiqi tolkii kama janno tago.
Markii ay dhalintu xoogsi tagto wixii ay soo xero gashaan ayaa iyana tolku qaybsadaa.
Xoogsigu ma ahan in Sacuudiga ama Imaaraadka loo shaqo tago ee waa in xoolo islaameed la soo dhaco.
Haddii ay beel dagaal gasho waa in intii ay magac wadaagaan hiil iyo hooba isla garab taagaa oo ay meel kala soo jeestaan haddii kale waxaa imanaysa godob taariikhda gasha oo gabayo iyo geeraaro laga tiriyo.
Hadaba dhaqankaas hiil iyo hooda ku dhisan ee ay Soomaalidu asalka u lahayd waa mid aad uga gedisan midka dawlad laga rabo ee shuruucda iyo qawaaniintiisa wata.
Markii Soomaalidu xoriyadda qaadatay ayaa dawladdii laga dhigay hal. Hashani waa mid ka geddisan geelii ay Soomaalidu dhaqan jirtay kalana dhici jirtay waayo ma ahayn mid xero tol keliya ku jirta ee waxay ahayd mid ummad dhan ka dhexeysa.
Dhibaatadii ugu horeysay waxay soo shaac baxday ka dib markii uu reer waliba isku deyay inuu hashan xeradiisa soo geliyo. Waxaa la iloobay in nidaamaka dawladeed yahay mid ay muwaadiniintu u simatahay qofka masuulka ahna laga rabo inuu caddaalad iyo sinnaan ugu adeego idilkood.
Hab dhaqnkii ku dhisnaa hiil iyo hoo ma ahayn mid si dhib yar uga tirtirmi kara maskaxda qofka Soomaaliyeed. Hab dhaqankan markii nidaamkii dawladeed lagu dabaqay ayaa hiilkii wuxuu isku rogay eex halka hoodiina ay ka noqotay musuqmaasuq iyo in hantida ummadda la lunsado.
Waxaa markiiba bilaabmay in qof aan xaq u lahayn darajo iyo dallacaad la iska siiyo hantidii ummadda ka dhexaysayna afka looga buuxiyo, dawladdiina waxay noqotay hal naaso badan oo qofba meeshii uu ka soo gaaaro ka maalayo.
Waagii miyiga la joogay qofka markii hiil ama hoo looga baahdo xoolihiisa ayuu wax ka bixin jiray hase yeeshee markan waxaa timid in qofka madaxda ahi xoolihii ummadda tolkii ka dhergiyo.
Qofkii xil ummadda u haya ee isku daya inuu sinnaan iyo caddaalad shacabka ugu adeega wuxuu noqonayaa tuke canbaar leh iyo wax ma tare naftiisa iyo tolkiiba gabay oo lagu khasaaray.
Eexda iyo musuqmaasuqaas salka u ah dhaqanka Soomaalida ayuu qarankii eeday oo uu ku burburay. Waxa ilaa iyo maanta la isku haystaana waa reerkii ay hasha maandeeq xeradiisa ku hoyan lahayd ee naasaheeda midka ugu caanaha badan maali lahaa.
Qofkasta oo Soomaaliyeed wuxuu doono ha ahaadee waa mid ay argatida qabiil ku dheertahay oo qaranimadu waxba la ahayn. Waxa Soomaali mideeya ama kala kexeeyaana waa qabiil.
Waxaa la isku dilay qabiil, waxaa la isugu eexday qabiil, waxa qaranka lagu burburiyay qabiil, ugu dambaystiina qabiilkii ayaa maanta ummaddan Soomaaliyeed xal loogu raadinayaa.
Waxaa sanndihii ugu danbeeyay soo shaac baxay wax loogu yeero is bahaysiyo ay ku midoobaan dagaal oogeyaal haybta iyo aragtida siyaasadeedba ku kala geddisan hase yeeshee ay dani isu keentay.
Dad badan ayaa u arkay isbahaysiyadan ifafaale lagaga gudbayo aragtidii qabiilka ku dhisnayd looguna gudbayo mid mabda�a iyo siyaasad ku dhisan.
Hadaba aragtidaasi waa mid runta ka fog waayo ma jiro siyaasi Soomaaliyeed oo mabda� aan qabyaalad ahayn leh dagaal ooge markuu yahayna hadalkiisaba daa.
Mudadii dheerayd ee uu socday shirkan Nairobi ayaa isbahaysiyada qaarkood samaysmeen sida G8, Samata bixint iyo ka abaabulka qaranka iyadoo ay horena u jireen SRRC iyo kuwo kale.
Isbahaysiyadan badankooda waxaa loo sameeyay si loogu xumeeyo ururo kale isla markaana shaqsiyaad la yaraysanayay ay isku muujiyaan si ay miisaan ugu yeeshaan shirka mana lahan ajande siyaasadeed iyo qorsho hawl gal oo mustaqbka ah midna
Hadaba markii la soo gaaray wajigii 3aad ee shirka oo ah midka ugu mihiimsan maadaama uu yahay xilligii ay qabiilo waliba xoogsi tagi lahayd si ay maandeeq xeradeeda u soo geliso ayaa waxaa caddaadatay in aanay isbahaysiyadaasi wax macno ah lahayn markii dagaal ooge waliba uu hiil iyo hoo u raadsaday tolkii.
Arintu maanta waxay isugu soo biyo shubatay qabiil dagaal ooge kastaana tolkii buu dhinac ka raacayaa illeen qabiilbaa wax lagu qaybsanayaaye.
Waxaa hadaba is weydiin mudan dawlad dagaal ooge soo dhiso isagoo welibana balan qaadyo hiil iyo hoo ah tolkii la soo galay wax tarka ay ummaddan dulman u keeni doonto?
Qofkii dalkan dan ka lahow ogow dagaalkii dhabta ahaa hadduunbuu bilawday waana adi iyo daadnimadaa!
�MA HADDEER IYO SOOMAALIYEEY HA GAALOOBINA [Fahad]
�Yaa kursi caashaqay oon Carta iyo Carab noqon [C/Waxid]
�Mushkiladda Maandooriyeha [Faisal]
�SOMALIYEEY IMAQAL, MIDNIMO IYO TAFARAARUQ [Nayruus]
�QORISTII FAR SOMALIGA MA WAXAY AHAYD HORUMAR [Xanaf]
�Zinnada oo noqotay cudurada layska dhaxlo midka ugu daran [Taqi]
�Ma Rabitaanka Somalidaa? Mise Rabitaanka Shisheeye? [D.yare]
�Keebaa daran: Gumeysigii mise Adoonsiga C/Qasim ee Webiga [Dirir]
�Kenya: Nabad Raadinka Somalia iyo Sudan, Isu ekaan iyo.. [Mahdi]
�Muqdisho oo ajiibtey baaqii gaalnimo diidka ee culumada [Cumar]
�C/qasimow Hubka Rer Cabudwaaq nabadayn ku bedel [Dhegacade]
�Aabaha Sigaarka Caba oo xaaskiisa ku sababi kara ilma kasoo dhac